အကို့နောက်မိန်းမ – Grab Love Story
မနေ့က ကျွန်တော့် အကိုတဝမ်းကွဲရဲ့ နောက်မိန်းမ နဲ့ လမ်းမှာ ဆုံဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို… ကျွန်တော့် အကိုတဝမ်းကွဲ နာမည်က ကိုထင်ကျော်ပါ… နှစ်လုံးရောဂါ နဲ့ ဆုံးသွားတာ (၃) နှစ်ကျော်ပြီ…။ သူရှိတုန်းက မိန်းမ တရားဝင် (၂) ယောက်ယူထားတာဗျ… ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ပဲ ကလေးရတယ်။ နောက်အိမ်ထောင် အမကြီးနာမည်က မိုးကြီးလို့ ခေါ်တာပဲ…နာမည်အရင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး…ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်လေး (၈) တန်းလောက်ထဲက ယူတာဆိုတော့ မမိုးကြီးလို့ပဲ ခေါ်တယ်။ အိမ်ကိုလည်း အကိုခေါ်လာဖူးတာနဲ့ ဝင်ထွက်ဖူးတယ်။ (၄) (၅) ခါလောက်ပါ။ ပုံစံက ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း မျက်နှာက ဝိုင်းဝိုင်း ဖင်တွေ နို့တွေက ထွားထွားကြီးတွေ အသားဖြူဖြူနဲ့…ငယ်ငယ်တုန်းထဲက သဘောကျမိပေမဲ့… မယားငယ်လို ဖြစ်နေတာရော…. အကို့မိန်းမ ဆိုတာရောကြောင့်… စိတ်ထဲ မှန်းဖူးတာလောက်ပဲရှိတယ်။ အိမ်လာရင်တော့… တနေလုံးနေတတ်တာမို့…. ညီတွေကိုလည်း ရေမိုးချိုးပေး…ထမင်းစားသောက်နဲ့ မိသားစုလိုပါပဲ….အကို ဆုံးသွားတော့…. ကျွန်တော်တို့ အိမ်နဲ့တော့ အဆက်အသွယ်သိပ်မရှိတော့ဘူး….မနေ့က အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းနားမှာ ကားရပ်စောင့်နေတာ… တူပါတယ်ကြည့်မှ… သူဖြစ်နေတယ်။
ဟာ…မမိုးကြီး မတွေ့တာကြာပြီ… ဘယ်တွေပျောက်နေလဲ…. ခု ဘယ်သွားမှာလဲ… လာလေ ကားပေါ်တက် လိုက်ပို့ပေးမယ် ဆိုတော့… ကားပေါ်ပါလာတယ်။ ရင်ဖုန်းနဲ့…မြန်မာဆန်ဆန်ပဲ…ဘီးစပတ်လေး ထုံးပြီး…. ကျက်သရေတွေ တိုးချင်တိုင်းတိုးနေတာ…ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းကြီးကလည်း…. ကျန်သေးတုန်း….ခု အရောင်းစာရေး လုပ်နေတယ်။ နင့်အကိုဆုံးပြီးထဲကပဲ…. ပလာဇာဖက်သွားမလို့….ဆိုလို့ ဒါနဲ့ ဘီယာတွေ ဘာတွေ ချသေးလားဘာညာနဲ့ စကားစလိုက်တော့… အလုပ်နားရက်ပဲ တစ်ခါတလေသောက်ဖြစ်တယ် ဘာညာနဲ့…သူဘီယာကြိုက်တတ်တာ အကိုကနေ တဆင့် သိထားတာကိုး ဒါနဲ့ အချိန်ရရင် အေးဆေးသောက်ရအောင် ပြောပြီး…ဆိုင်ရွေးတော့….သူ့ ဝတ်စုံကြီးနဲ့ ဘီယာဆိုင်ထိုင်လို့က အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ်… ဒါနဲ့… ဝယ်သွားပြီး ကန်တော်ကြီးထဲ သွားသောက်တာပေါ့ ဆိုတာနဲ့ ပါလာတယ်။ မြန်မာဘီယာ ၂ ကဒ်ဝယ် အမြည်းတွေ တစ်သျှုးတွေနဲ့… မစီစဉ်ပဲ… ပွဲတည့်နေတာ…. ဟိုရောက်တော့…. ကားနောက်ခန်းထဲ… နောက်ဖုံးဖွင့်ထိုင်… သောက်လိုက် စကားပြောလိုက်နဲ့…. အဆင်မပြေတာတွေရော အကို့ကို သတိရတာတွေရော…. လက်လေးကိုင်လိုက် နှစ်သိမ့်လိုက် အမြည်းလေးခွံကျွေးလိုက်နဲ့….. တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းငုံနေလိုက်နဲ့…. သူနဲနဲ မူးနေမှန်းသိတော့… ပြန်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား… အလုပ်ကို ဒီလိုပုံနဲ့ မပြန်နဲ့တော့ ရေမိုးချိုးလိုက်ဆိုပြီး…. စကားစတော့…. ဘယ်နားမှာချိုးရမှာလဲတဲ့ ရပါတယ်… ဒီနား နီးနီးနားနား ဟိုတည် တစ်ခုခု ရှိမှာပါ ဆိုတော့…. သူ့ အလုပ်က ကားတွေ ဖြစ်သွားဖြတ်လာတွေ့သွားရင် မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့…. လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မင်္ဂလာဒုံနားက မြန်မာလိုက်ဖ် ဟိုတည် မသွားလိုက်တယ်။
ဟိုရောက် အခန်းယူပြီး ရေချိုးဆိုတော့…ဆက်သောက်အုန်းမယ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက် တစ်လုံးဆီ ထပ်ချပြီး… ၂ ယောက်လုံးအပြောတွေရော အကြည့်တွေရော ရဲလာတယ်။ မမိုးကြီး… အကိုသာဆုံးတာ… မကျသေးဘူးနော် ဘာညာနဲ့ စကားစတော့.. မမိုးကြီး ဖင်ကြီးတွေ နို့ကြီးတွေလေဆိုတော့….ဆောက်ကောင်လေး ကိုယ့်အမကို နှာဘူးကြည့်ကြည့်တယ်ဘာညာနဲ့ ဘီယာဖုံးခွံတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ရှောင်သလိုနဲ့ သူ့ပြန်လုံးပြီး အပေါ်က အုပ်မိုးပြီး… နှစ်ခမ်းတွေ နမ်းပစ်လိုက်တယ်…ပထမ အတင်းစိထားပြီးနောက်တော့ ပြန်နမ်းတယ်။ ဒီလောက်ဆို ကိုယ့်ဖက်ပါနေပြီဆိုတာ သေချာပြီး…. သူ့ပေါင် ၂ ဖက်ကို ခြေထောက်နဲ့ ကားထုတ်ပြီး ဆီးခုံတည့်တည့်ပေါ် မှောက်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ချည်သားဘောင်းဘီ အတိုဆိုတော့ မမိုးကြီးဂွကြားထဲ နီးနီးကပ်ကပ် ဖိကပ်မိသွားတယ်။ မျက်လုံးတွေ မှိတ်နေပြီး… ရုန်းတာတော့ မရှိဘူး… ဟိုတည်ပါကေးပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းကြီး…. အသက်က ၃၅ လောက်ပဲရှိအုန်းမယ်….မြန်မာဆန်ဆန်ကြီးနဲ့ လှချင်းတိုင်းလှနေတဲ့ တတုံးတခဲကြီး…ဆောက်ဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်ကြည့်တော့ နွေးနေတာပဲ… ခနနေတော့ လက်ကို လာဖယ်တယ်…. ကျွန်တော် အချိန်မဆွဲသင့်ဘူးဆိုပြီး မမိုးကြီးထဆိုပြီး မနိုင့်တနိုင်နဲ့ ပွေ့ထူပြီး ကုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တော့… မှောက်လျှက်ကြီး….ထမီဆွဲလှန်ပြီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီချွတ်ရင်းနဲ့ နံပတ်ကြည့်တော့ (၄၀) ဆိုပဲ… အဲဒါမို့ အိုးကြီးက ဟီးထနေတာ….အတွင်းခံ ကျွတ်သွားတော့ အလိုက်သင့်ပဲ သူ့ဟာသူ ပက်လက်လှန်လာပြီး အကျီက ကြယ်သီးတွေ ကူဖြုတ်ပေးတယ်။ အကုန်လုံးကျွတ်သွားတော့… မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး မှိန်းနေတယ်။
နားနားကပ်ပြီး မမိုးကြီးဆောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေးချင်တယ်ပြောလိုက်တာ… မျက်လုံးချက်ချင်းပဲ ပွင့်လာတယ်… မမိုးကြီးပေါင်နှစ်ချောင်းဆွဲဖြဲပြီး တစ်ခါတည်းယက်ပေးလိုက်တာ…. ဆောက်ဖုတ်က တော်တော် အလိုးခံထားရပုံပဲ အနားဖတ်တွေဆို အကြီးကြီးတွေတောင် ဖြစ်လို့…. အမွှေးတွေလည်း ထူကြီး… ဖင်ကတော့… သိပ်မထိထားရသေးဘူးထင်တယ်။ ဖွင့်ခံထားရတဲ့ ပုံစံတော့တွေ့တယ်။ ဆောက်ဖုတ်အတွင်းထဲထိ ယက်ပေးနေရင်း စေတနာတွေ ပေါက်ပြီး ဖင်ပါ ယက်ပေးလိုက်သေးတယ်….သူလည်း ငတ်နေရှာမှာပါဆိုပြီး လိုးနေရင်း…မမိုးကြီး ကြမ်းလို့ရသေးလားဆိုတော့…. အင်း…ရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး… ထုံးစံအတိုင်း ဖင်တွေပါရိုက်ရိုက်ပြီးလိုးပေးလိုက်တယ်။ မောလာပြီ မမိုးကြီး အပေါ်တက်မလားဆိုတော့…. မတက်ဘူး..ဆိုပြီး… ကွိုင်ကိုဆွဲချွတ်ပြီး…. သူပဲ စပြီးမှုတ်ပေးတယ်… အားနားလို့ မတောင်းဆိုတာကို အလိုက်သိပုံများ…ကျနော်လည်း အားရပါးရ ပါးစပ်ထဲပဲ ပြီးခဲ့လိုက်တယ်။ ၂ ယောက်သား ခနနားပြီး… မမိုးကြိးဖင်ချကြည့်ချင်တယ်ပူဆာတော့… ဂျယ်မှ မရှိတာတဲ့… ကွိုင်တွေထပ်ဖောက် ပါတဲ့ ဆီလေးနဲ့ သုတ်ပေမဲ့… မရဘူး…. တော်တော်ကြပ်နေတာ.. ဒစ်ခေါင်းပဲ ဝင်တယ်။ ဒါနဲ့ လက်နဲ့ ဖင်နှိုက်ပြီး သမ… နဲနဲလေးကျယ်လာတော့ ထည့်ကြည့်တော့… ဒစ်လေးဝင်တယ်… ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆန့်… ထည့်ပေမဲ့ ပြန်ပြန်ထွက်တာနဲ့ ချွေးတွေပါ ပြန်လာတယ်။ ကဲပါ မမိုးမင်းကိုကူပါ့မယ်ဆိုပြီး…ဖင်ကို ထောင်နေအောင် ကုန်းပေးပြီး… လက်မနဲ့ ဖင်ပေါက်ချဲ့ခိုင်းတယ်…. ဟလာတော့… စိုက်ပြီးသွင်းတာ ဝင်သွားရော… စိတ်က တအားပါလာပြီး… ဖေလိုးမ ဆိုပြီး ဖင်ကြီးကိုင်ပြီးစောင့်စောင့်လိုးတာ မဆဲပါနဲ့ လိုးချင်ရင်သာ… သဘောကျလိုးပါဆိုလို့…နောက်ထပ် ၁၀ ချက်လောက်ပဲ စောင့်ရတယ်ဖင်ထဲမှာပဲ ပြီးသွားရော…လူလည်း မော…ချွေးလည်းရွှဲ နင့်အကိုတောင် ငါ့ကို အလိုမဆဲဘူး…နင်ကျမှ…ငါ့ ဖေလိုးမတဲ့ တကယ် နင်တို့ ညီအကိုတွေ ဝိုင်းလိုးတာ ခံရတာဟာမ ပါတဲ့ ဟီးး ရေမိုးချိုးပေးပြီး…အပြန်ကျ ချစ်တီးထမင်း ဝင်စားပြီး… ဘယ်ပို့ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ သူမ အိမ်ပဲပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်…. မမိုးကြီးနောက်လည်း ခေါ်မယ်နော်ဆိုတော့…အေးပါတဲ့ နောက်ရက်ထဲက ပြန်တွေ့မယ်လေဆိုပြီး တဂျီဂျီနဲ့ ပူဆာနေတာ… စနေနေ့ အပြင်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်လာတယ် ဒါနဲ့ အိမ်ထိ တိုက်ရိုက် သွားမခေါ်ပဲ ကျောက်မြောင်းစတိုး ရှေ့မှာ အဖေါ်နဲ့ ဂျယ်ဝင်ဝယ်ပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်။ ဒီနေ့တော့ မီနီစကဒ်နဲ့ တီရှပ်နဲ့ ဆံပင်လေးကိုဖွပြီး နောက်ကို သပ်ပြီး စီးလာတယ်။ ဒါနဲ့ အောင်းနေကျ မြန်မာလိုက်ဖ် ပဲ မသွားလိုက်တယ်။ ဘန်ဂလို ယူမလို့ ဈေးတက်သွားတာနဲ့ ရိုးရိုးအခန်းပဲ ယူဖြစ်တယ်။ရောက်ရောက်ခြင်းပွေ့ဖက်နမ်းရှုံပြီး စကဒ်အောက်ကနေ မမိုးကြီးဆောက်ဖုတ်ကို စမ်းနေမိတယ်။ အံမယ် မရွှေချောက တစ်ချောင်းကြိုးနဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီက အရင်နေ့ကလို သိပ်ပြီးလန့်နေစရာလည်းမလို..စည်းရုံးနေဖို့လည်းမလိုတော့ပဲ… လိင်ကိစ စကား လေးတွေပါ နှစ်ယောက်သားပြောကြရင်း နဲ့ အပေးအယူတွေ တည့်နေတာ။ သူပြောပြမှ ကျွန်တော့်အကို ဂေါ်လီထည့်ထားကြောင်းနဲ့ ဖင်ကိုတော့ ၁၀ ကြိမ်လောက် အဖွင့်ခံဖူးကြောင်း ပြောပြတယ်မမိုးကြီး ဆောက်ဖုတ်က အကြီးကြီး လိုးရတာ အရမ်းအားရတယ်လို့ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်တော့… မောင်လေးလီးလည်းအကြီးကြီးပါပဲတဲ့ မမိုးကြီးခံရတာ သဘောကျတယ်တဲ့… ပြောတတ်လိုက်ပုံများ… စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတတ်ပါ့။ ဒီနေ့ ဘာလို့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်လာတာလဲဆိုတော့… မမိုးဖင်ကြီးကို မင်းကို ခံစားစေချင်လို့တဲ့… ဟုတ်တယ်လို့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ကို မချွတ်ပဲ…မမိုးကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီးလိုးချင်နေတာလို့ ပြောလိုက်တော့… လီးကို သူမလက်နဲ့ ညှစ်ပြီး… ကစ်ဆင်လာဆွဲတယ်။ ဝယ်လာတဲ့ ဂျယ်ဗူးနဲ့ ကွန်ဒုံးတွေလည်းပြလိုက်ကော… သေချာစီစဉ်ထားတာပဲတဲ့ မတွေ့ချင်ရှာဘူးနော်တဲ့… မမိုးဖင်ကြီးကို လိုးချင်နေတာလေလို့ ပြောနေတုန်း… ကျွန်တော့်လီးကို သူမပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး စုပ်ပေးနေတယ်။ အကိုလည်း အတော်သင်ပေးထားပုံပဲ…. ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကို လုပ်ပေးတာပါ လီးကို သူမ မျက်နှာနဲ့ ပွတ်ပေး ဥတွေပါ စုပ်ပေးနဲ့….ကျွန်တော်လည်း မမိုးနားသယ်စပ်က ဆံပင်တွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ထိုးဖွပြီး သပ်တင်ပေးနေတယ်။ နားသယ်စပ်နဲ့ လည်ဂုတ်စပ်နားမှာ ဆံပင်လေးတွေ ကျနေတာ… သိပ်လှတာဗျာ… တစ်ချက်တစ်ချက် အာခေါင်ထဲထိုးထိုးထည့်ပြီး စိမ်ထားလိုက်သေးတယ်။
မမိုးကြီးကို ရပြီမမိုးလို့ ပြောပြီး… သူမ ခြေထောက်တွေကို နားရွက်နားထိ ထိလောက်အောင် လှန်တင်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဘေးကို ကားကားလေးဖြဲထားလိုက်တယ်။ အနက်ရောင်ဇာလေးနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ လေးအောက်မှာ မဆန့်မပြဲနဲ့ မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးက ပေါ်ထွက်နေတယ်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ ကို ဘေးကို ဆွဲချပြီး…အမွှေးတွေ ရိတ်လာတာပဲ ဒီနေ့ မမိုး…မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးက ပြဲနေပြီနော်… ဆောက်ဖုတ်ပြဲမကြီးလို့ စလိုက်တော့ … ပြဲလည်း လိုးပေးပါတဲ့ အင်းပေါ့ လိုးချင်လို့ ခေါ်လာတာပဲကို…လိုးမှာပေါ့လို့ ပြောလိုက်တော့… နင့် အကို ဂေါ်လီတွေနဲ့ သမလို့ အလိုပြဲလန်ကုန်တာတဲ့… ဒီနေ့ အမွှေးလေး ကိုပြောင်နေအောင် ရိတ်လာပေးတယ်အဆီတစ်ထပ် အသားတစ်ထပ်နဲ့ ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးကို ဒီနေ့မှ သေချာကြည့်မိတယ်။ ဘေးနှုတ်ခမ်းနားမှာ မှဲ့ အကြီး ၁ လုံး ဖင်ကြားနားမှာ တစ်လုံးနဲ့ ဆီးခုံ အလည်လောက်မှာ တစ်လုံး စုစုပေါင်းမှဲ့ (၃) လုံးတောင်ပါတာပဲ… မမိုးဆောက်ဖုတ်က မှဲ့တွေနဲ့ အဲဒါမို့ နှာထန်တာဆိုတော့… ရီနေတယ်။ ထန်တဲ့ မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးကို အလို စုပ်ပေးချင်တာဆိုပြီး… ရေခဲထုတ်စုပ်သလို အပြင်ကို စုပ်ထုတ်တော့… တဟီးဟီးနဲ့ ညီးပြီး ခေါင်းကို အတင်းဖိကပ်ထားတယ်။ခြေထောက်တွေလည်း မြှောက်သွားလိုက် စိသွားလိုက်နဲ့… အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာမှ…. ဖင်ကြားထဲထိ စီးကျအောင် စောင့်ရင်းနဲ့ ဆီးခုံတွေ ပေါင်တွေကို နမ်းနေလိုက်တယ်။ ဖင်ကြားထဲထိ ဆောက်ဖုတ်ရည်တွေ စိမ့်ကျလာတော့ ဖင်တွေယားပြီး…တစ်သျှူးနဲ့ သုတ်မယ်ဆိုပြီး လှမ်းယူတယ် …လှမ်းယူတဲ့ လက်ကို ပုတ်ချပြီး… ဖင်ကြားကနေ ဆောက်ဖုတ်ဝထိ… စီးကျလာတဲ့ အရည်တွေကို အထက်ကနေ အောက် လျှာနဲ့ အပြားလိုက် ယက်ပေးလိုက်တော့ ဖင်ကြီးကိုခါယမ်းပြီး… မင်း အရမ်းတော်တယ်ကွာ… မခံစားနိုင်ဘူးလို့ ပြောပြီး သက်ပြင်းအရှည်ကြီးချပြီး ငြိမ်သွားတယ်….ကောင်းလား မမိုးကြီးဆိုတော့…အင်းတဲ့ ခေါင်းလေးပဲ ငြိမ့်ပြတယ်။ ခုတင်ပေါ်မှာ စောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး မမိုးပေါင်ကြားမှာ နေရာယူရင်း လီးကို အရှိန်နဲ့ စောင့်လိုးလိုက်တယ်…. ချောင်နေတော့ ရှောခနဲ့ပဲ…. ဂွေးဥ နဲ့ ဖင်ကြားရိုက်သံကလည်း တဖတ်…ဖတ် နဲ့…..မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးကို ငယ်ငယ်ထဲက အလိုစောင့်လိုးချင်တာလို့ ပြောလိုက်တော့…အောက်ကနေ နှုတ်ခမ်းလေး ပြန်စူပြတယ်။ နို့သီးတွေကို ချေပြီး…အောက်ခံဘောင်းဘီ ကိုပါ ကျွန်တော် ချွတ်လိုက်ပြီးမမိုးရှေ့မှာပဲ နမ်းပြလိုက်ပြီး အခန်းထောင့်ကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
နောက်ထပ် အဆုံးထိသွင်း အဆုံးထိ ထည့်နဲ့ တရစပ် စောင့်လိုးနေလိုက်တယ်… လိုးရတာ ကောင်းရဲ့လားတဲ့ ချောင်နေလို့ အားနာတယ်တဲ့… ဘယ်လိုနေပေးရမလဲတဲ့….ဒါနဲ့ ဘေးတစ်စောင်းနေခိုင်းပြီး… ကျွန်တော်ကတော့ မုဆိုးဒူးထောက်ပုံစံနဲ့ပဲ… တင်ပါးကြီးတွေ့ကိုကိုင်ကိုင်ပြီး စောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါလည်း ဖင်ကို သပ်သပ်မဲ့ တေ့ပြီးထိုးတယ် မဝင်ပါဘူး… နာသွားပြီး… အားခနဲ့ အော်တယ်…. ဖင်လိုးတော့ မလို့လားတဲ့ မလိုးသေးပါဘူး… သပ်သပ်မဲ့ စကြည့်တာဆိုတော့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေကို ပြန်ချေပေးတယ်…. မမိုးဖင်ကြီးကို ကိုင်ကိုင်ပြီးလိုးရတာ သိပ်အားရဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က လိုးနေရင်းနဲ့…မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးကို ဘေးတစောင်းခုလိုးနေတာလေ ဆိုပြီးပြောပြောပြီး သမတာ… ပထမတော့ သူကြောင်နေတယ်…နောက်တော့ မမိုးဘာပြန်ပြောပေးရမလဲတဲ့….အလိုတွေ မပြောတတ်ဘူးနော်တဲ့…. ကျွန်တော်လည်း မမိုးကြီးတော့ သိလောက်မယ်ထင်နေတာ… သူအလိုပြောတော့ ဘာပြန်ပြောရမှန်း ရုတ်တရက် မသိဘူး ဒါနဲ့….စိတ်တိုတဲ့ လေသံနဲ့…. ဖေလိုးမ ဒါလေးတောင် မပြောတတ်ဘူးလားဆိုပြီး ဖင်ကိုလည်း လက်နဲ့ ဖြဲပြီး တအားဖိစောင့်လိုးတော့…. ဆဲပြန်ပြီဆိုပြီး… ရီနေတယ်…ကြိုက်လားဆိုတော့…အင်းတဲ့ အရမ်းကြိုက်တယ်တဲ့။ မမိုး ဖင်ကုန်းပေးပါလား…မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖင်ကုန်းပြီးချချင်လို့ ဆိုတော့… ထပြီးကုန်ပေးတယ်…. အပေးကောင်းတယ်ဗျာ ခါးလေးကိုခွက်ပြီး ဒူးကိုကားထားတာ…တကယ့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြီး… ထင်ကုန်းပေးအုန်းဆိုတော့.. ခါးလေးပိုခွက်ပြီး… ထပ်ကားပေးတယ်… ထပ်ကုန်းပေးအုန်းဆိုပြီး ဂျီကျလိုက်တော့….တွေ့လား..လိုးမှာဖြင့်မလိုးဘူး…ဖင်ပြဲပြီးသေစေချင်နေတယ်လူကိုတဲ။ သူမလည်း စကားအဆုံးကျွန်တော်လည်း လီးကိုတေ့ပြီးစောင့်ထိုးလိုက်တာ…ဗြွတ်ခနဲ့ လီးကြီးကဝင်သွားပြီး…အမေ့…သေပါပြီ သမီးတဲ့….ဒီတခါတော့ အစလို တရစပ် မလိုးတော့ပဲ… တစ်ချက်ဆို တစ်ချက် ကျွန်တော့်ဆီးခုံနဲ့ သူမ ဆောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ ရိုက်သံထွက်လာတဲ့ထိ အရသာခံပြီး သူမဖင်ကြီးကိုကိုင်ပြီး လိုးနေလိုက်တယ်….နောက်လီးကိုပြန်ထုတ်ပြီး…. မမိုးဆောက်ဖုတ်နဲ့ အစိကို ပွတ်ထိုးပြီး တဖတ်ဖတ်နဲ့ ရိုက်လိုက် အဆုံးထိ စောင့်လိုးလိုက်နဲ့ မမိုးလည်းရှေ့ကနေ အမေ့…မေ့…သေပါပြီ…တွေရော အသံတွေကို ဆူညံလို့ အရှိန်လေးရလာတော့ ဆံပင်တွေကိုလှမ်းဆွဲပြီး… လက်တစ်ဖက်က ဆံပင်ကိုကိုင် တစ်ဖက်က ဖင်ကိုရိုက်ပြီး လိုးတော့တယ် ဆံပင်ကိုဆွဲတာနာတော့ သူမလည်းဖင်ကို အနောက်ကို ပြန်စောင့်ပြီး သက်သာရာ ရှာတော့တယ်….မြန်မြန်လေးလိုးတော့ သူမ ပြီးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့… လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ကိုဆွဲယူပြီး… တရစပ်ဆောင့်လိုးလိုက်တာ… ၈ ချက် ၉ ချက်လောက်နဲ့တင် ၂ ယောက်သား တူတူပြီးသွားပြီး မမိုးဖင်ကြီးပေါ်မှာပဲ… ကျွန်တော်လဲကျသွားတယ် မမိုးရဲ့ ကျောတွေ နားထင်တွေ ပါးတွေကို နမ်းနေပြီး… ဒီအတိုင်းစိမ်ထားတယ်။ ဆင်းပါအုန်းဆိုလည်းမဆင်ဘူး….ဖင်ကြီးက အိနေတော့….အရမ်းဇိမ်ခံလို့ကောင်းတယ်… ဝက်မှေးလေးလာမှေးနေတယ်တဲ့… ကျွန်တော့်ကိုအောက်ကနေ ပြန်ပြောတယ်….နောက်တော့ နှစ်ယောက်သား ရေတူတူချိုး… ထပ်မလိုးဖြစ်တော့ပေမဲ့ ဆောက်ဖုတ်ကိုတော့ ဆပ်ပြာတိုက်ပေးရင်း နှိုက်လိုက်သေးတယ်…. နောက် အောက်ထပ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ ညစာဆင်းစားပြီး… နှစ်ယောက်သားပြန်တက်လာတယ်။ တီဗွီဖွင့်ထားပေမဲ့ ၂ ယောက်လုံးမကြည့်ချင်ပါဘူး… နမ်းလိုက် စလိုက် လိင်ကိစ လေးပြောလိုက်နဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ လုံးထွေးနေတာတော်တော်ကြာတယ်….မမိုး အကြွေးကျန်သေးတယ်နော်ဆိုတော့…ဘာအကြွေးလဲတဲ့ ရှိပါဘူးတဲ့…. ဒီနေ့ ဖင်မချရသေးဘူးလေ ဆိုတော့…သေနာလေးတဲ့ ရီနေတယ်….ဒါနဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ မှောက်လျှက်နေခိုင်းပြီး စကဒ်ကိုဆွဲလှန်…အောက်ခံဘောင်းဘီ လေးဘေးကိုဖယ်ပြီး ဖင်ပေါက်လေးကိုဖြဲပြီး လျှာနဲ့ မမှီတမှီလေးယက်ပေးနေမိတယ်။ တော်တော်ကြာတယ် ၁၀ မိနစ်လောက်နေတော့… မ မရတော့ဘူးတဲ့… လိုးကြရအောင်တဲ့… ဂျယ်ဗူးရောတဲ့… ဂျယ်သုံးပါဘူး…ဒီအတိုင်းလိုးကြည့်ချင်တာဆိုတော့…. ဟယ် အလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ မမိုးပြောတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ… ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ထည့်တယ်… မရဘူး… အတော်အားစိုက်ပြီးထည့်တော့…တဝက်လောက် ဝင်သွားတယ်…. မမိုးကြီးလည်း အော်တာ အခန်းထဲ ဆူညံနေတာပဲ။ ကျွန်တော်က ကုတင်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ် ဒူးကွေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ မမိုးဖင်ကြီးပေါ်မှာ ခွပြီး ထည့်နေတာ…. မမိုးက ဖင်ပဲ ထောင်ပေးထားပြီးမျက်နှာက မွေ့ယာနဲ့ ကပ်နေတယ်… ခေါင်းကိုဆွဲထူပြီး နမ်းမယ်ကြံတော့…. မျက်ရည်တွေနဲ့…ဘာလို့လဲဆိုတော့နာလို့တဲ့….အဲ့ချိန် ကျွန်တော် ဖိပြီး စောင့်ချတော့… ခေါင်းခါခါပြီးနာတယ်ဆိုပြီး ငိုပြီးပြောတယ်…တော်တော်လည်းကြပ်တာဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ပါးလေးတစ်ချက်နမ်းပြီး ခေါင်းကို လက်နဲ့ ဖိထားပြီး…. အတင်းဖိလိုးနေတယ်…ကျွတ်မထွက်သွားအောင်လည်း ဂရုစိုက်ရတယ်.. အောက်မှာတော့ တရှုံရှုံနဲ့ ငိုနေတာ…မရပ်ဘူး….(၁၀) မိနစ်လောက်ပဲ ကြာမယ်ထင်တယ်… သူမငိုသံရော ဖင်ကြီးက ခံစားရတာအရမ်းကောင်းတာရော… အရမ်းလည်းကြပ်နေတာရောနဲ့ ကျွန်တော်ထွက်ကုန်ရော…. ပြီးသွားတော့ သူမ ရုန်းပြီးဖယ်တယ်… ကျွန်တော်လွှတ်မပေးသေးပဲ…. ဖိကပ်ထားပြီး… စောင့်နေမိပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး လီးက ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီး ကျွတ်သွားမှ…ဖင်ပေါက်ကိုသေချာဖြဲကြည့်ပြီး..တံတွေးထွေးထည့်လိုက်တယ် ထွီခနဲ… ဖင်ကိုလည်းဖြန်းခနဲရိုက်ပြီး… ဘေးကို တွန်းချလိုက်တယ်… ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး… ရေဆေးနေတယ် ထွက်လာတော့လည်းတရှုံရှုံနဲ့…. ဘာလို့ငိုနေတာလဲမေးတော့… မညှာပဲ အတင်းလိုးလို့တဲ့…. တခါမှ ဂျယ်မပါပဲ မခံဖူးဘူး အရမ်းနာတယ်တဲ့… နောက်ဆုံး သူ့ဖင်ကိုဖြဲပြီးတံတွေးထွေးတာလဲ ရွံလို့လားတဲ့ ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ကြောင်း… ဒါက ချစ်လို့… ဘီဒီအပ်အမ် အသေးစားလေးနဲ့ မမိုးစိတ်ကို ဖမ်းစားတာဖြစ်ကြောင်း….သေချာရှင်းပြပြီး အနမ်းတွေပေး…ဖက်ထားတော့…. တကယ်လားတဲ့…တော်တော် နာနေတယ်ပြောတယ်…. မနက်ကျ မသက်သာရင် ဆေးဝယ်ထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်…. တညလုံး…ထပ်မလိုးဖြစ်တော့ပဲ…. မမိုးဆောက်ဖုတ်ကြီးကိုပဲ ကိုင်ပြီးအိပ်နေလိုက်တော့တယ်… စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်တာရော သနားတာရော မနက်ကျ… မနက်စာစားပြီး… မမိုးအတွက် မြန်မာ အကျီဝမ်းဆက် ချည်ပေါင်းသား… တစ်စုံလိုက်ဝယ်ပေး… ရေမွှေးတပုလင်းလည်း တစ်ဗူးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်… လိုချင်တာယူလေဆိုတာကို အင်တင်တင်လုပ်နေတာနဲ့ နီးရာဆိုင်ထဲ ဝင်ဝယ်ပေးလိုက်တာ… နာနေသေးလား ဆေးခန်းပြပေးရမလားဆိုတော့ ရတယ်တဲ့..အိမ်ကျမှ… ဆရာခိုလေးထည့်ထားလိုက်မယ်ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ မမိုးကြီးကို အိမ်လိုက်ပို့ပြီး ကျွန်တော် အမ်ပြန်ရောက်တော့ နေ့လည် ၁ နာရီရှိနေပြီ ခုနက ဖုန်းလာတာ… သတိရတယ် တွေ့ချင်တယ်တဲ့ ဖင်ကလည်းနာနေသေးတယ်ပြောတယ်…နောက်ဆို အလို အရမ်းမဆိုးပါနဲ့တဲ့..မမိုးကြိုးစားပြီး အလိုလိုက်ပါ့မယ်တဲ့။